Caalamka Online » Erdogan oo Shir Caalami ah Dunida Islaamka uga hor digay Reer Gaalbeedka
Erdogan oo Shir Caalami ah Dunida Islaamka uga hor digay Reer Gaalbeedka
November 30, 2017 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Madaxweynaha Dalka Turkiga Reccep Tayip Erdogan oo ka qayyb galaua shirka wadamada Islaamka ee ka socda Maagaalada Istanbul dalkaaasi ayaa ka digay qorshe halis ah oo ay doonayaan wadamada reer galbeedka in lagu burburiyo midnimada iyo mustaqbalka dunida Islaamka.
Erdogan ayaa ka dhawaaajiyay in reer galbeedka dunida islaaamka ay ku baraaarugto dhagarta muuqata ee reer galbeedka “Qorshe aad u xun ayaa socda oo ka dhan ah midnimada, mustaqbalka iyo hodantinimada dunida muslimka ah”ayuu yiri
Sidoo kaale Madaxwayne Erdogan oo khudbadiisa shorka dalalka Islaamka ka sheegay in dunida muslimka ay sanadihii dhowaa ku sugneyd xaalad aad u adag dalalka Reer Galbeedka ku eedeeyey inay dunida Muslimka usoo dhoofiyeen taariikhdooda Dhawaan galka ah.
Dhanka kale waxa uu ka hadlay dagaalada ay ka wadaaan dalka Suuriya iyo ka aamusnaaanta Xasuuq wadareedka ka socda Daalka Burma “Ka aamusnaanta reer galbeedka ee xasuuqa ka socda Syria toddoba sano, ayaga oo albaabka ka xirtay dadka muhaajiriinta, iyo ayaga oo aan cambaareyn xasuuqa muslimiinta Myanmar, waxay na tustay wejigooda dhabta ah” ayuu yiri.
Ugu dambayn dadka Muslimiinta ah ayaa ku tilmaama erdogan Masuulka kaliya ee dunida Islaaamka ee Runta indhaha ka saaari kara reer galbeedka, iyadoo Inta badan Dunia kadaba meersanaysa.
2 Responses to Erdogan oo Shir Caalami ah Dunida Islaamka uga hor digay Reer Gaalbeedka
Abdulhameed Al Attas says:
Erdogan is an indisputably a true Muslim leader.
Yaxye axmed yuusuf says:
allahu akbar illahw gaalada naga qbo